भोली अमेरिकन आइडलको फाइनल, नेपाली युवा गायक दिवेशले जित्ने प्रवल संभावना सबैले शेयर गरौं। – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
भोली अमेरिकन आइडलको फाइनल, नेपाली युवा गायक दिवेशले जित्ने प्रवल संभावना सबैले शेयर गरौं।
काठमाडौं, जेठ ४ । अमेरिकन आइ’डलको फाइ’नल आइतबार साँझ हुने भएको छ । अमे’रिकी सम’य अनुसार साँझ ७ बजे एबिसी, च्यानल १० मा यो शो सुरु हुनेछ ।
नेपाली लोकप्रिय युवा गायक आर्थर गन’ उर्फ दिवेश पोखरेल सहभागी अमेरिकन आ’इडलको फाइनललाई लिएर उनका फ्यानहरु उत्साहित भएका छन् ।
आइतबारको फाइनल सुरु हु’नासाथ ७ प्रतिस्पर्धीमध्ये २ जना बाहिरिनेछन् र बाँकी रहेका गायक–गायिकाले दुई वटा गीत प्रस्तुत गर्नेछन् ।
अनलाईन सर्वे’क्षण अनुसार आर्थर पोखरेल सबैभन्दा अगाडि रहेको यो प्रतिस्पर्धामा दिवेशले वि’श्वचर्चित आइडलका ३ वटै विश्वविख्यात गायक गायि’काह’रुको मन जितेर विश्वभरका फ्यानहरुले पनि उनलाई भोटको वर्षा गरेका बेला धेरै अ’नलाईन स’र्वेक्षणले दिवेश उत्कृष्ट पाँचभित्र पर्ने र सम्भ’वत उनले नै आइडल जित्ने अड्क’ल लगाएका छन् ।
पुरै सिजनभर पोखरेलको निर्णायक केटी पेरी, लियोनल रिची र लुक बार्यनले उनको प्रशं’सा गरेर थाकेका थिएनन् । उच्च शिक्षा सकेपछि उनी आफ्नो प’ढाई पूरा गर्न परिवारसँगै अमेरिकामा बस्दै आएका हुन् । नेपालमा रहँदा विभिन्न एल्बमहरु नि’कालेर सानै उमेरमा लो’कप्रियता कमाएका दि’वेश काठमाडौंमा जन्मिएका हुन् ।
Previous सा’वधान ! गृहमन्त्रालयले दियो यस्तो क’डा चेतावनी! शेयर गरौं ।
Next सीमा रक्षा दौरा सुरुवाल लगाउने ओलीले गर्ने कि धो’ती लगाउने महतोले? -सांसद महतो